वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : पहिलो स्वाद - 'काजुओ इशिगुरो'को
२०१७ को नोबेल पुरष्कार विजेता काजुओ इशिगुरोको लेखनीको पहिलो स्वाद लिइयो हालै।
आफ्नो पेशागत अध्ययन बाहेक अरु चिज पढ्ने कुरामा मलाई रुचि निश्चय पनि छ तर के पढ्ने र कसरी पढ्ने कुरामा कुनै नियम छैन। म खासमा 'जे भेटियो, त्यहि पढ्ने!' मान्छे हुँ। ज्ञानको यो विशाल ब्रम्हाण्डमा रहेका अनन्त संख्याका पुस्तकहरुबाट 'छानेर' पढ्न कुनै नियमनै बनाउनुको तुक पनि देख्दिन म। जे भेटिन्छ, त्यो पढिहाल्नुपर्छ!
चर्चाकै भरमा म कमै किताब छान्छु। कोहि आत्मीयले कुनै किताब 'पढ्दा हुन्छ।' भनेर सल्लाह दिएको खण्डमा त्यो खोजेर पढ्छु। नेपाली प्रेसबाट निक्लेका किताबहरु तुरुन्त नकिन्ने, 'दुई वर्षजति पर्खेर मात्र किन्ने' मेरो सिद्धान्त साथीहरुमाझ चर्चित छ। राम्रा किताब दुई वर्षपछि पनि पाइन्छन्, नराम्रा हराइसकेका हुन्छन्, खोज्ने टण्टै भएन भन्ने विचार हो मेरो। सधैं दुई वर्ष कुर्नु पनि पर्दैन। नेपाली छापा जगतको सिण्डिकेटले जत्रो ठूलो होहल्ला खडा गरेर बजारमा ल्याए पनि धेरै किताब दुई महिनामै गुमनाम भइसकेका हुन्छन्।
कतिपय अवश्थामा भने तात्तातै कुनै किताब किन्नबाट जोगिन सकिँदैन। विमोचन कार्यक्रमहरुमा पुगेपछि किन्नैपर्ने अघोषित बाध्यता आइपर्छ। यस्तो 'बाध्यता'का कारण खत्तम र झूर किताबहरुको पनि सानो संग्रह बनीसकेको छ मसंग।
पछिल्लो पटक पढेको तीर्थ गुरुङ्गको 'पाठशाला' मलाई निकै मन परेको नेपाली किताब हो। त्यसका बारेमा आफ्नो फेसबुक भित्तोमा केहि लेखेको पनि थिएँ।
म काजुओ इशिगुरोको कुरा गर्दै थिएँ। जापानी नाम हारुकी मुराकामीका बारेमा निकै पढेको-सुनेको थिएँ तर काजुओ इशिगुरोको बारेमा पहिले त्यस्तो केहि पढेको वा सुनेको स्मरण छैन। मुराकामीकै पनि कुनै कृति पढेको चाहिँ छैन मैले, अब पढ्नुपर्ला।
पोखराको हिमालयन रिडर्स कर्नर भन्ने पुस्तक पसलका विजयजीले आफ्नो पसलमा आइपुगेका नयाँ किताबहरुको जानकारी गराउनुहुन्छ, फेसबुक मेसेञ्जरका माध्यमबाट। केहि समयपहिला '२०१७ का नोबेल पुरष्कार विजेता काजुओ इशिगुरोका किताबहरु आइपुगे।' भनेर सूचिसहितको सन्देश पठाउनुभएको थियो मेसेञ्जरमा। केहि समयपछि छोरीको जाडो बिदाका लागि किताबहरु किन्न गएँ छोरीलाई लिएर। छोरीले उसका लागि किताबहरु छानीसकेपछि, आफ्ना लागि भने काजुओ इशिगुरोको कुनै किताब लिने विचार आयो। उपन्यासभन्दा कथाहरुबाट शुरु गर्नु ठिक होला भन्ने लागेर 'Nocturnes' भन्ने पाँचवटा कथाहरुको संग्रह किनें। पहिला मूल्य हेरिएनछ, पैसा तिर्ने बेला त्यो एउटा किताबकै रु ९०० देख्दा झण्डै सातो गएको :)
Nocturnes भित्रका पाँचवटै कथाहरु वैवाहिक जीवनको संकटलाई मुख्य विषय बनाएर बुनिएका छन्। र त्यो क्षणमा जोडिन आइपुग्छन् कुनै संघर्षशील संगीतकारहरु। भौतिक रुपमा सम्पन्न आजको पश्चिमी समाजको एउटा अंशको चिन्ता र चासोलाई सुरुचिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। विषयवस्तु र कथा बुनिएका ठाउँहरु उस्तै लागेपनि पात्रहरु र घटनाक्रम नयाँ लाग्छन् र कतैपनि दोहोरिएजस्तो लाग्दैन। हरेक कथा पढीसकेपछि वर्तमान पश्चिमी समाजका असन्तोषहरुको चित्र दिमागमा छापिन्छ। निरन्तरको भौतिक सम्पन्नताले एउटा निरसता पैदा गरेको छ उनीहरुको जिन्दगीमा। उनीहरुका पिडा र असन्तोष भौतिक छैनन् - मानसिक छन् र हाम्रो समाजका पिडा र असन्तोषभन्दा फरक छन्। विवाह वा पारपाचुके समेतलाई आफ्नो पेशामा सफलताको माध्यम बनाउने वा पेशागत सफलताकै लागि भनेर अनुहारको महंगो कस्मेटिक सर्जरी गराउने कथाहरु हाम्रो समाजमा लेखिन सक्दैनन्। हाम्रो समाज अझै गरीब र अभावग्रस्त भएकाले हाम्रो समाजका कथामा भौतिक अभावका कारण सृजित दु:ख र ब्यथाहरु बढी देखिनु यसैले अस्वाभाविक भएन।
काजुओ इशिगुरोका यी कथाहरुले मलाई विश्वविद्यालय जीवनमै पढेको The Stories of John Cheever सम्झाए।त्यो संग्रह मसंग अझै छ। हुनत, जोन चीभरका कथाहरु अमेरिकी अर्धशहरी (suburban) परिवेश विशेषमा बुनिएका छन् तर जोन चीभरका कथाहरु पढेपछि जुन अनुभूति मनमा आएका थिए, त्यस्तै-त्यस्तै अनुभूति इशिगुरोका यी कथाहरुले पनि दिए।
अब इशिगुरोका कुनै एक उपन्यास आँटनुपर्ला।
Posted by Basanta at 1:21 AM
प्रादेशिक 'राजधानी' को कोलाहल
मेरो ऐतिहासिक सहर कीर्तिपुर
छोरा र Barry